Sariitatra : Hanolotra ny « Expovision » i Pov -
AccueilVaovao SamihafaSariitatra : Hanolotra ny « Expovision » i Pov
Sariitatra : Hanolotra ny « Expovision » i Pov
14/08/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Mpanao sariitatra. Anisan’ireo mpanao gazety amin’ny tontolon’ny sariitatra i Pov. Hanolotra ny « Expovision » eny amin’ny foiben’ny Craam eny Ankatso i Pov manomboka anio ary haharitra hatramin’ny faran’ny volana. Nahafantarana an’i William Ranaivoson, io no tena anarany, ny fanehoana amin’ny kisary mampihomehy, nefa mifono hevi-dalina ny zava-misy, na eo amin’ny fiainam-pirenena ara-politika, na ara-tsosialy.
Hisongadina ao anatin’io fampirantiana io ny lalana nodiavin’i Pov teo amin’ny sehatry ny sary. Ho hita ao anatin’izany ny ampahany tamin’ireo sariitatra an-gazety izay noheveriny nisongadina. Toa izany koa ireo tantara an-tsary efa navoakany, na niarahany niasa tamin’ny mpanao sary hafa. Santionany amin’ireny ny « Méga complots à Tana », « Coût d’état à Tamatave », « Lundi noir »… Etsy ankilan’izay anefa dia tontolo iray hanehoan’i Pov ny talentany ihany koa ny fandravahana amin’ny sary ireo fitafiana toa ny « T-Shirt ».
Tao anatin’ilay gazety mpiseho isam-bolana « ILampy » no nanombohan’ny tantaran’i Pov sy ny sariitatra tany amin’ny taona 1995. Tany amin’ny taona 1997 kosa izy vao tena niditra lalina tamin’ny sariitatra an-gazety ka namoahany ny sangan’asany isan’andro. Ny septambra 2006 izy no nikopak’elatra nihazo ny Nosy Maorisy. Amin’izao fotoana, dia manao ny asany amin’ireo Nosy roa ireo i Pov.
Navoakan’ny madagate ny sary, ny adiresy, ny orinasa ary ny anaran’ny ray aman-drenin’ireo mpianatra sy avara-pianarana malagasy nanohitra ny fanasana an’i Andry Rajoelina ho fampihorohoroana azy ireo manoloana ny fanehoan-keviny… Nanohitra ny fanasan’ny fikambanana ASPA ...Tohiny
Kaomina Renivohitra Antananarivo-MIEZAKA MANAKANA NY TETIKASAN’NY FILOHA